I-Pajama syndrome kwii-freelancers: Ungoyisa njani? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UFran Marin | | Ukuphefumlelwa, Ezahlukeneyo
Ukuphuhlisa umsebenzi wethu ekhaya kunamanqaku amaninzi amahle kwaye anomtsalane, nangona kunjalo ukuba zii-freelancers kusenza ukuba sithambekele ngakumbi ekuhluphekeni kwisifo se-pajama. Ngaba awuzange uve ngaye? Njengoko ubona, igama lakhe libonisa ngokwaneleyo kwaye ndiqinisekile ukuba uyi-freelancer iyakuqheleka kuwe.
Xa siqala kule ndlela yokungasebenzi ngobuso, siqala umsebenzi wethu ngomdlandla othile, ubungqongqo kunye nomnqweno wokusebenza. Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha siqhela ukusebenza imisebenzi kwaye kulapho icandelo lokukhuthaza liqala ukwehla. Emva koko saqala ukuphuma kwiiyure zethu zomsebenzi, asililawulanga kakuhle ixesha lethu kwaye ngenxa yoko saphela neepijama zethu kuyo yonke imini kwaye singanyatheli esitratweni, phambi kwescreen sekhompyuter yethu kwaye sixuba ubuchwephesha bethu inkalo. Asinakho ukwahlula omabini amacala obomi bethu ngendlela esempilweni, ethi ekuhambeni kwexesha ichaphazele imveliso yethu, inkuthazo yethu ngakumbi impilo-ntle yethu.Singakuthintela njani konke oku? Nazi ezinye iingcebiso eziza kukunceda Yilwa nale ngxaki:
Qalisa usuku ngamandla: Ukuqala kosuku sisiseko sophuhliso lwaso. Kuya kufuneka sizame ukulwa ubuvila kwaye sikuphephe ngaphezulu kwako konke ukunikezela okugqithisileyo esizinika kona xa sisebenza ekhaya. Ngokucacileyo oku kuthetha ukuba nokuba awuyokusebenza eofisini okanye uphume ekuseni, kufuneka uvuke kwakusasa, kufuneka uhlambe, uvuke, unxibe iimpahla zasesitalatweni, ufumane isidlo sakusasa esimnandi kwaye ngaphezulu kwako konke ube usebenza. Oku kusisiseko kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba iyakwenza umahluko kuwe nasemsebenzini wakho.
Musa ukuwusebenzisa gadalala umzimba wakho: Ngale nto yokuba singabaphathi bethu ngamanye amaxesha siziva siphakuzela okanye uxinzelelo olukhulu. Ayothusi into yokuba i-freelancer ibhenele kwiishedyuli ezixhaphazayo kunye nokunqongophala kwamaxesha okuphumla okanye ikhefu. Sithanda ukucinga ukuba sizakubangcono ngolu hlobo kwaye nemveliso yethu iya kwanda. Nangona kunjalo, akukho nto iqhubekayo kwinyani, oku kugqiba ukuthatha umthwalo wayo. Ixesha elide lomsebenzi kunye nokuphathwa gadalala ngokwasemzimbeni nangokwengqondo ekugqibeleni kuguqulela ekuwohlokeni ngokwasemzimbeni nangokwengqondo okuphantse kusinyanzele ukuba silale okanye siphumle. Esi inokuba sesinye sezizathu eziphambili zokuba siphele siyithiyile imisebenzi yethu. Siyazilungiselela ngeeyure zomsebenzi ngaphandle kokuphumla, oku kuthatha umthwalo ngenxa yokuba ukwehla kuyafika kwaye yindlela esidinga ukuphumla ixesha elide kunokuba kufanelekile, sigqiba ukophula inkqubo yethu kwaye kuvela ingxaki. Awusenabo ubomi bobuqu kunye nobungcali, yonke into iqala ukuxubana. Ndiyakuqinisekisa ukuba amaxesha amaninzi unokuba nemveliso ngakumbi kwiiyure ezi-5 kunaku-9.
Ukuzibekel 'amangomso izinto, igama eliyintloko: Kwimeko apho ungekayiva loo nto, oko kuthetha ukuyeka okanye ukubeka imisebenzi ebalulekileyo (umsebenzi) kwizinto ezonwabisayo njengokujonga u-Facebook, u-Twitter, ukudlala imidlalo okanye ukubukela imovie. Ndiyakholelwa ukuba ezi ntlobo zeengxaki zisonjululwa ngombono omncinci kunye nokukhula. Kufuneka uhlale ucacile malunga nokuba uyaphi, ungaze ulahlekelwe ziimeko. Yiba ngqongqo kwisiqu sakho. Ukuba ikhefu lakho linamaxesha athile, bambelela kuwo.
Iinjongo mazifezekiswe: Ukuphuhlisa isicwangciso-qhinga sakho ngokwamanqanaba okanye ngeenjongo kuya kwenza ukuba inkqubo inyamezeleke ngakumbi kwaye icwangciswe. Oku kunxulumene nezinto ezininzi ezinje ngenkuthazo, amandla kunye namandla ombutho onawo. Ngokoluvo lwam, ezimbini zokuqala zisonjululwe ngokupheleleyo ukuba sinenjongo esizihoye kakhulu kwaye siyayithanda (ukuyifumanisa kufuneka ujonge ngaphakathi kwaye uzibuze imibuzo), ke kule meko ndiza kugxila kwinto yesithathu Kuba ndicinga ukuba yeyona ngxaki inzima kuni. Udinga i-ajenda okanye indlela ekunceda ukuba ugcine ifayile kunye nokugcina umkhondo wenyathelo lakho lokugqibela, kunye nolandelayo oya kuthi uthathe ukuze usondele esiphelweni sakho. Kuya kufuneka wenze umkhwa wokuphononongwa kunye nolungelelwaniso. Umzekelo, yonke imihla ekupheleni kosuku lwakho lomsebenzi yenza umxholo omncinci wento ekufuneka uyenzile kusuku olulandelayo. Kukwabalulekile ukuba sizame ukwenza izicwangciso zenyanga okanye zekota. Hlala phantsi uzibuze: Yeyiphi injongo esiza kuyenza kwezi nyanga zintathu zilandelayo? Ekugqibeleni, ukuba siyayazi ukuba siyisebenzisa njani le nto, iya kuba nefuthe elihle kubuchule bethu nakwinkuthazo.
Jonga impilo yakho: Zama ukuhlala usebenza ngexesha lakho lokuzimela. Dlala imidlalo, uhambe rhoqo, uhambe uhambo. Sela amanzi amaninzi ngemini kwaye utye ukutya okunezondlo. Kubonakala ngathi bubudenge ngakumbi ndikuqinisekisa ukuba ayisiyiyo. Oku kuyakuchaphazela ngokuthe ngqo ukusebenza kwakho kunye nesiqhelo sakho, ndithembe. Ewe kweli candelo sibandakanya eyona nto iphambili kwezengqondo. Hlalisana, hamba uhambo, uye kwiimuvi, wenze izihlobo ... Ufuna elinye ilizwe kuleyo ivula phambi kwakho eofisini yakho. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ungaphezulu kokuyila okanye umyili womxholo: Ungumntu kwaye unezinye iimfuno kunye nenkuthazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » I-Pajama syndrome kwii-freelancers: Ungoyisa njani?
Ndabenhle Xulu (@ndabenhlendaba) sitsho
Molo ... umxholo undibambile, mhlawumbi ngenxa yayo nayiphi na into efana nenyani okanye ngengozi emsulwa ... Inomdla kakhulu, ngakumbi elo xesha le-Procrastination uff, ukunika ukubetha kwesifuba ... Inene kukukhuthaza ... bonisa ... iintlawulo umhlobo…
Phendula kuJavierGaravito (@JavierGaravito)
Molo uJavier, inyani kukuba mva nje iya ixhaphaka, ewe. Enkosi ngokuphawula, ukubulisa! :)
Enkosi ngolu ngeno. Ngamanye amaxesha kufuneka sigxile kwaye silungelelanise umendo wethu kwaye sinike ukubaluleka kwezinto esizilibalayo (ezinjengempilo)
Phendula ku www.siguemedia.com
Iikhamera ezi-5 ezinokuntywila ngeli hlobo ungaphoswa